Little Free Library ၌ယခုအခါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထိုင်ခုံ ၅၀၀၀၀ ရှိသည် eReaders အားလုံး
Little Free Library တွင်အမေရိကန်၌ထိုင်ခုံ ၅၀,၀၀၀ ရှိပြီးဖြစ်သည်
လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်ကကျွန်ုပ်တို့သည်“ တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းဆိုးများအကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။အသေးစားအခမဲ့စာကြည့်တိုက်«အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မွေးဖွားခဲ့ပြီးအကူအညီမဲ့သောကလေးများနှင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိလူများအကြားစာဖတ်ခြင်းကိုအများဆုံးပျံ့နှံ့စေရန်လှုပ်ရှားသည်။ က) ဟုတ်တယ် ဒီလှုပ်ရှားမှုကအခမဲ့စာအုပ်တွေပါ အသုံးပြုသူများကသူတို့ကိုကောက်ယူနိုင်ပြီးစာအုပ်တွေဖတ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်ပြီ။
ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမယ့်တောင်မှဒီလှုပ်ရှားမှုကကျန်းမာနေပါတယ်။ ဤသူကား၊ ၎င်း၏ 50.000th သေးငယ်တဲ့စာအုပ်ဆိုင်၏အကောင်အထည်ဖော်မှု.
ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာစာအုပ်ဆိုင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးရပ်တည်ချက်ကအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေအတွက်အမိုးအကာဘေးမှာရှိနေပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် Little Free Library လှုပ်ရှားမှုဖောင်ဒေးရှင်း၏အကြီးအကဲကသူ၏စီမံကိန်းအားအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပြီး၎င်းတို့တွင်ရာထူး ၅၀,၀၀၀ သာရှိသည်ဟုသာမက ဤရာထူးများကိုစာအုပ်များဖြင့်ဖြည့်စွက်ရန်ကြေညာသူများနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ; ၎င်းတို့တွင်ဤစာမူများနှင့်သူတို့၏စာအုပ်များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည့်ကော်မရှင်နာများနှင့်အေးဂျင့်များရှိပြီး၊ ဤလှုပ်ရှားမှုကိုထပ်မံဖြန့်ဝေရန်အတွက်အကျိုးအမြတ်မယူသောအသင်းအဖွဲ့များနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
အမှန်တရားက အကယ်၍ မင်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် အခမဲ့စာကြည့်တိုက်အနည်းငယ်ကသူတို့ခံစားခဲ့ရသောဖျက်ဆီးခြင်းလုပ်ရပ်များကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည် ၎င်းသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ များစွာသောအသင်းအဖွဲ့များသည်သူတို့နှင့်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်လျှင် ပို၍ ပင်ကောင်းမွန်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအရာသည်စပိန်ကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများ၌ထိုသို့သောလှုပ်ရှားမှုသည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းနိုင်သည် (သို့) အနည်းဆုံးလူအများစုအတွက်အရေးကြီးသည် အချို့သောစာအုပ်များသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်သောဖတ်ရန်အတွက်ခိုးကူးခြင်းကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများကိုသူတို့အသုံးပြုကြသည်.
ကံမကောင်းစွာဖြင့်တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာသွားသည့်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာမျှမပြောရသေးပါ၊ များစွာသောသူတို့အတွက်သတင်းသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုတည်းသောမကောင်းသောအရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ မထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Little Free Library တွင်အမေရိကန်၌ထိုင်ခုံ ၅၀,၀၀၀ ရှိပြီးဖြစ်သည်
Onyx Boox Kepler Pro သည်အလွန်“ ပရီမီယံ” စျေးနှုန်းနှင့်အတူ“ အနီး” Premium eReader ဖြစ်သည်